रोजगारीको जीवनमा नग्नता नराम्रो? | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
2। अपार्टमेन्टमा नग्न सार्नुहोस्
5। नग्न तान्नुहोस्
नग्नता - केहिका लागि तिनीहरू सामान्यतया सामान्यतया, अरूले शर्मिन्छन् र तिनीहरूबाट टाढा छन्। सबैलाई हिसाब नगर्ने नैतिक छुट्टीको लागि शिविरमा जाने, सनामा वा एक नाउस्टस्ट समुद्र तटमा आराम गर्नु। तर यो किन छ?
दैनिक जीवनमा ट्याबू विषय नग्नता
यद्यपि हामी नग्न जन्मेका छौ, केहि थोरै मानिसहरू यतिबेला उनीहरूका आमाबाबु र सम्भवतः उनीहरूको धर्मबाट प्रभावित हुन्छन्, नग्न पनि नगर्न।
रोजगारीको जीवनमा नग्नता - आफ्नै घरमा लुकेको छ?
केहि शर्मिला छन् किनकी उनि सोचन्छन् कि उनीहरूको आदर्श व्यक्ति छैन। यो एक राम्रो भावना नग्नता पनि हुन सक्छ, जुन पत्ता लगाउन चाहान्छ।
यहाँ तपाईंलाई एक नग्नता स्व-प्रयोग लिन मद्दत गर्न वा एक जना दिग्गजको रूपमा तपाईंको विषयलाई गहिरो सुझाव दिइन्छ।
1। सुत्न नदिनुहोस्
तपाईं सुत्न सुत्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई एक्लै लगाउन एक युगलको रूपमा मात्र सम्भव छ। एक राम्रो साइड इफेक्ट, विशेष गरी गर्मी मा, यो छ कि तपाईं गीला पसीने कुनै लुगा लगाउने छैन।
जो घर मा छ र काम गर्न जाने छैन, पसलहरू वा नियुक्तिहरूमा घरको नग्न चारैतिर हिंड्न र सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। अथवा तपाईं सोफेमा सानो तौलिया राख्नुहुन्छ, यसलाई बस्नुहोस् र किताबको साथ आराम गर्नुहोस्। यो दर्पणको अगाडि मात्र हेर्न वा यो संगीतको साथमा मात्र नृत्य गर्न सम्भव छ।
3। नग्न खाओ
यदि तपाइँ पहिले नै बस्नुभएको छ भने, यो कपडा बिना खाना खाउन पनि सम्भव छ। साथै, खाना पहिले नै तालिका मा नग्न राख्न सकिन्छ। यदि तपाईं एक जोडी हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग चकलेट क्रीम, स्ट्रबबेरी र क्रीमको साथ प्रेम जीवनलाई मसाज गर्ने मौका छ। उदाहरणका लागि।
4। सूर्यबत्ती नग्न
यो अद्भुत छ यदि तपाईं कपडा बिना कपडा वा अन्य लुगा लगाउनुहुन्छ। शरीर उज्ज्वल स्पेस छोडेर बिना सहज टेनिंग, उदाहरणका लागि तपाईंको बगैचामा गर्न सकिन्छ, यदि छिमेकीहरूले यो देख्न सक्दैनन् वा तपाईं आफैंलाई आफैंलाई हेरचाह गर्न सक्नु भएको हो कि त्यस्ता माथिल्लो कपडा पर्दा वा छाताहरू। यदि कुनै निजी उद्यान छैन वा तपाईं ताल जान चाहानुहुन्छ, तपाइँ पहिला एक समुद्र तट अनलाइनको खोजी गर्नु पर्छ, जहाँ वस्त्र-रहित सूर्यको बानीको सम्भव छ। यदि तपाईं महिलाहरु द्वारा पूर्ण नग्न लुगाफाट गर्न हिम्मत नगर्नु हुन्छ भने, तपाईं पहिले सूर्यमा झूट बिना पहिले प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को केहि समय यो अझै पुरा तरिकाले लुगा खानुपर्छ यो सम्भव छ।
सनकोट पछि, तैरने कपडा बिना तैरने। यहाँ तपाईं आफैं र ठुलो गीला महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं त बाहिर पूल वा ताल बाहिर rises भने, तपाईंले एक ड्राई बिकनी वा स्नान सूट पहने छ बस रुचि किनभने, कुनै भिजेको लुगा एक पटक वा के तपाईं अब परिवर्तन गर्न सुक्खामा आवश्यक छ कि छाला लीन भनेर थाह खुसी हुनेछ। अब यो सिर्फ तिनीहरूलाई हटाउन वा एक dries सम्म सूर्य मा भिजेको झूठ गर्न सम्भव छ।
6। नग्न वर्षामा छन्
यसको लागि तपाईलाई एक ठाउँ चाहिन्छ जहाँ कसैले तपाईंलाई तपाईंको बगैचामा पार्क वा पोखरीमा जस्तो देख्दैन। यदि तपाइँसँग कुनै चिसो छैन र त्यसपछि न्यानो ग्रीष्मकालीन वर्षा गर्नुहोला, यसले तपाईंको शरीर र वर्षाको ढोका महसुस गर्न सम्भव छ।
7। नग्न तस्बिरहरू लिनुहोस्
लगभग हरेक मोबाइल फोनमा पहिले नै एक क्यामेरा छ। वा एक द्रुततले यसको लागि उच्च गुणस्तर क्यामेरा लिन्छ। उद्देश्यहरूको लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं बेडमा वा सोफेमा नग्न पोष्ट गर्नुहुन्छ। यो क्यामेरा एक तपस्यामा राख्न सम्भव छ, उदाहरणको लागि नग्न पकाउन वा पियानो प्ले गर्नुहोस् र स्वचालित-टाइमर प्रयोग गरेर फोटोहरू थिच्नुहोस्। जो कोहीसँग साझेदार छ र तिनीहरूलाई आश्चर्यचकित गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि क्यालेन्डरसँग उनीहरूको आफ्नै नग्न तस्विरहरू छन्, पनि एक पेशेवर फोटो स्टुडियोमा पनि बदल्न सक्छ। अथवा तपाईं सँगै सँगै वा तपाईंको साझेदारको सामने पुग्नुहुन्छ।
तर नग्न तस्विरहरूबाट सावधान रहनुहोस् - सेप्टेटिङ। खतरनाक प्रवृति!
त्यसैले यो फरक नगरी चीज गर्न कठिन छैन। तपाईंले भर्खरै पहिलो चरण लिनु भयो, त्यो हो, हिम्मत। एक पटक यो अवरोध हटाउन एक पटक, तपाईं यसको अद्भुत शरीर महसुस गर्न र कपडा बिना मुक्त महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
संयोग, एक प्रेमिका र एक पुरुष संग पुरुषहरु संग महिलाहरु यो नग्न आत्म प्रयोग गर्न सक्छन्, यदि तपाईं एक्लै हिम्मत नगर्नु हुन्छ। कतिपय पछि, तथापि, धेरै महसुस गर्छ कि नग्नता पनि सुन्दर छ र आफैलाई अधिक र अधिक पल्ट व्यवहार अनचालक।
रोजगारीको जीवनमा विश्राम प्रक्रियाहरू
पारिस्थितिक र स्थायी जीवनमा जीवन बिताउने